Suuqa Bacda Laptop-ka waxaa si qoto dheer u bartay qorayaasha warbixinta iyagoo si weyn diiradda u saaray muuqaalka iibiyaha, ballaarinta gobolka, qaybaha hogaaminaya, isbeddelada iyo fursadaha muhiimka ah, iyo maaddooyinka kale ee muhiimka ah. Warbixinta ayaa soo bandhigtay qodobo awood badan oo sii kordhinaya ...
“Safarka” micno kale ayuu leeyahay
Qofkasta, “safarka” waxay leeyihiin macno kaladuwan. Caruurta aan taxadar laheyn, safarka waxay cuni karaan qadada macaan ee hooyadeed ay la fadhiisatay jaceyl, oo ay si farxad leh ula ciyaari karto asxaabta, runtii waa kan ugu farxadda badan. Iyaga, macnaha safarku wuxuu noqon karaa "ciyaar" iyo "cun"! F ...
Sida loo badbaadiyo nabadgelyada markaad iibsaneyso cuntada
Anigoo ah cilmi-baare ku takhasusay cuntada, waxaan maqlayaa su'aalo badan oo dadku ka qabaan oo ku saabsan halista coronavirus ee ku jirta dukaamada raashinka iyo sida loo amaan helo inta aan wax ka iibsaneyso cuntada inta lagu jiro masiibada. Halkan waxaa ku yaal jawaabaha qaar ka mid ah su'aalaha guud. Waxa aad taabato armaajo cuntada ayaa ah mid aan ka walwal qabin kan neefsanaya ...